Puntland – Geelle Magazine
Puntland oo Go’aano kasoo saartey bandowgi Xakamaynta Covid19.
Guddiga Covid-19 ee Puntland ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo berito (18ka May 2020), la khafiifiyey go’amadii bandowga ee hore guddigu usoo saaray 24-ka March 2020, sida isu socodka dadka , xarumaha ganacsiga iyo keenista qaadka. Dadka qaadka ka ganacsada […]
ahmedzaki Posted On May 17, 2020
Qarax ka dhaca manta magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lala eegtey gudoomiyihii gobolka mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur-yare kaas oo lala eegtey xili uu kasoo baxayay xarunta gobolka galkacyo. Bajaaj ama dhugdhugley laga soo buuxiyay walxaha qarax […]
Ciidamada amniga Puntland ee looyaqaan PSF ayaa Hawlgalo ka sameeyeen gudaha magaalada Bosaso ayaa waxay ku soo qabteen qaraxyo kala duwan oo ay kooxda Daacish ku diyaariyeen sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamka PSF ta […]
Madaxwayne Deni oo Saraakiil Cusub u Magacaabay Ciidanka Madaxtooyada.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa Xeer Madaxweyne Lr. 42 ee May 14, 2020 ku magacaabay Taliyaha iyo Taliye ku-xigeenka Ciidamada Madaxtooyada ee Dowladda Puntland. Madaxweynaha Dowladda Puntland. Markuu arkay : Dastuurka Dowladda Puntland Qodobkiisa 80aad. Markuu arkay: […]
Dadka kunool deegaanka Cowsane ee gobolka sanaag ayaa hab isku tashi ah ku dhistey Xarumaha caafimaadka, waxbarashada iyo saldhiga deegaanka. Gudoomiyaha deegaanka cowsane ee Gobolka sanaag Daahir Ciise Warsame oo lahadlay warbaahinta dowlada Puntland ayaa ugu horayn ka warbixiyay baahiyaha […]
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu faah-faahin ka bixiyey Khasaaraha ka dhashay daadadkii dhawaan ku rogmaday Magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka Karkaar ee Puntland. Madaxweyne Deni ayaa waxa uu marka hore sheegay in daadadkii ku rogmaday […]